"Defund the Police" ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆန္ဒပြနေ
အမေရိကန် လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေက တောင်းဆိုနေတဲ့ "Defund the Police" ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေက သတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် လူထုကတောင်းဆိုနေတဲ့ "Defund the Police" ကို ပြည်နယ်အစိုးရတွေဘက်က ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ဆောင်နေသလဲ။
ရဲတွေချုပ်နှောင် ဖမ်းဆီးမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူမည်းအမျိုးသား George Floyd ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို တက္ကဆက် ပြည်နယ် ဟူစတန် မြို့မှာ ကျင်းပနေပြီး နာမည်ကျော် အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအ၀င် လူပေါင်း ရာနဲ့ချီတက်ရောက်လာတဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ စတာတွေကို ဗွီအိုအေ အယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာကို မအင်ကြင်းနိုင်က Skype ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဒီနေ့တော့ အမေရိကန်မှာ အခြေအနေက အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တယ်နော် နောက်ပြီးတော့ George Floyd ရဲ့ အသုဘအခမ်းအနား ကျင်းပနေတဲ့ Huston မြို့အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အန်ကယ် ဘာတွေ တွေ့ရသေးသလဲ။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ မအင်ကြင်းပြောသလို အသုဘအခမ်းအနား ကလည်း အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ ဘာသာရေးဆန်တဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသွားသူရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့ကြဖို့အတွက် သူ့ကို ဂုဏ်ပြုစကားတွေ ပြောကြတယ် အဲဒီမှာ တက်ရောက်သူတွေကတော့ ၅၀၀ လောက် ၊ သူတို့ကတော့ Private ceremony လို့တော့ခေါ်တာပဲ ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ ပရိသတ်ကလည်း တော်တော်များများရှိတယ်။ သူ့ရုပ်အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်မယ့်နေရာကို သယ်ဆောင်တဲ့လူတွေပါ စီတန်းလိုက်ပါလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူ့ကို ဂုဏ်ပြုပြောတဲ့ အထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ ပုဂိုလ် ၂ ယောက်ကတော့ ဒီမိုကရက် သမ္မတလောင်း Joe Biden နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ Rev. Al Sharpton တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေကလည်း သူ့ကို ချီးကျူးထောပဌာပြုတဲ့ စကားတွေ ပြောကြတယ် ဓမ္မတေးတွေ သီဆိုကြတယ် အားလုံး အေးအေးဆေးဆေး ရှိနေပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ အခု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ "Defund the Police" ကြွေးကြော်သံတွေ တော်တော်လေးပြင်းထန်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာအပိုင်းမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ဘတ်ဂျက်က ပြည်နယ်အလိုက်ပေးတာဆိုတော့ "Defund the Police" ကြွေးကြော်ချက်တွေအပေါ်မှာ အန်ကယ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ Defund ဆိုတဲ့ စကားကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ပြန်ရင်တော့ Fund လုပ်နေတာ မလုပ်နဲ့တော့ဆိုတော့ ပိုက်ဆံပေးနေတာ မပေးနဲ့တော့ ၊ ပိုက်ဆံပေးနေတာ ရပ်လိုက်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလောက်အထိ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မပြင်းထန်ပါဘူး တကယ်လက်တွေ့ တင်ပြနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေကတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပေးနေတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို ပိုပြီးထိရောက်အောင် ဘယ်လို သုံးမလဲဆိုတဲ့သဘောကို အများအားဖြင့် ဦးတည်နေတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့က ဘာလုပ်စေချင် သလဲဆိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ Policing ဆိုတာ လူဆိုးတွေကို ဖမ်းတာ ၊ ထိန်းတာ အပြင် တခြား ပညာရေးကိစ္စ ၊ ပြည်သူတွေအတွက် ပိုလုံခြုံမှု ရှိစေမယ့် တခြားကဏ္ဍတွေ တော်တော်များများ လွှဲပြောင်းသုံးဖို့ နောက်ပြီးတော့ လူထုအသိုင်းအ၀ိုင်း ထဲက လူငယ်တွေကိုလည်း လုံခြုံရေးကိစ္စမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကူညီပံ့ပိုးဖို့ပေါ့လေ အဲဒီပိုက်ဆံနဲ့ အဲဒီသဘောနဲ့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က Defund ၊ Dismantle ၊ Divert လို့ပြောတယ် တကယ်တော့ တိတိကျကျ ပြောရင်တော့ Defund လုပ်တာ Divert ပေါ့လေ သူတို့ကို ပေးနေတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို တခြားနေရာတွေမှာ ဖြန့်သုံးဖို့ သက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့ Minneapolis လိုမြို့တွေမှာတော့ တော်တော်လေး ရှေ့ပြေးပြီးတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို လုံးဝ ဖျက်ပြီးတော့ ပုံစံသစ် တမျိုးနဲ့ အများပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ စဉ်းစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဆိုတော့ အခု ဒီ ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ့နော် အမေရိကန် သမိုင်းမှာလည်း အပြင်းထန်ဆုံး လူထု ဆန္ဒပြပွဲတွေအခြေအနေပေါ့နော် အဲဒါလည်း ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ဂယက် ဘယ်လောက်အထိ ကြီးမလဲရှင့်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ နိုင်ငံရေး ဂယက်ကတော့ ကြီးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်တုန်းက ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ထိပ်တန်း အငြင်းပွားစရာ ယှဉ်နိုင်စရာမဟုတ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တခုက အခုအခါမှာ ထိပ်တန်းရောက်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနဲ့ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ကိစ္စ ။
သုတေသနပြုတဲ့ စစ်တမ်းတွေအရလည်း ဒီကိစ္စဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တခု ဖြစ်လာပြီဆိုတာ ပြောနေပါတယ် ဆိုတော့ ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတခုတော့ ဖြစ်လာမှာပါ။ Joe Biden တို့ကို လူမည်းတွေရဲ့ မဲဆန္ဒက ပိုပြီးတော့ ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မယ် သူတို့က လူမည်းတွေရဲ့ မဲနဲ့ ပိုပြီးတော့ အားသာလိမ့်မယ်လို့ တချို့က တွက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်စဉ်းစားမိတာကတော့ Donald Trump က သူ့ရဲ့ အားသန်တဲ့ စီးပွားရေးကို ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ အဓိက သူထားပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ အခု ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကရော ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာဦးမလား။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့ အရှိန်နည်းနည်းလျော့သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ် သူ့ရဲ့ အသုဘအခမ်းအနား ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ဒါပေမယ့် ဒီ Issue ကတော့ ဆက်ပြီးတော့ ရှိနေမှာပါ။ ဒါဟာ ၁၉၆၀ မာတင်လူသာကင်းတို့ခေတ် လှုပ်ရှားမှု နောက်ပိုင်းမှာ ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာ လူထု ပါဝင်မှု အများဆုံးဖြစ်တယ်။ အဖြူ၊ အမဲ၊ အာရှ၊ လတီနို အားလုံးပါဝင်ကြတဲ့ လူထုအခမ်းအနားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Texas ပြည်နယ်က ရေဒါဆိုတဲ့မြို့ တချိန်တုန်းက KKK အစွန်းရောက်အဖြူတွေရဲ့ အဖွဲ့ကြီးစိုးတဲ့ မြို့ဆိုပြီးတော့ နာမည် ဆိုးခဲ့တဲ့မြို့ အဲဒီမြို့မှာတောင်မှာ ဒီအခါမှာ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးဖို့ ဆန္ဒပြ စည်းဝေးတာတွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ တော်တော့်ကို ထိရောက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ကိစ္စလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အခုလို အမေရိကန်ကအခြေအနေတွေကို သုံးသပ်ပြောပြသွားတဲ့အတွက် အန်ကယ်ကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက နောက်ဆုံးအခြေအနေ စတာတွေကို ဗွီအိုအေ အယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာကို မအင်ကြင်းနိုင်က Skype ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါ။
အမရေိကနျမှာ ရဲတပျဖှဲ့ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးကို ဒသေန်တရအစိုးရတှေ ဘယျလိုဆောငျရှကျနလေဲ
အမရေိကနျ လူထုဆန်ဒပွပှဲတှကေ တောငျးဆိုနတေဲ့ "Defund the Police" ရဲတပျဖှဲ့ဆိုငျရာ ရနျပုံငှေ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေး ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ရဲတပျဖှဲ့ဆိုငျရာ ဘတျဂကျြကို သကျဆိုငျရာပွညျနယျတှကေ သတျမှတျတာဖွဈတဲ့အတှကျ လူထုကတောငျးဆိုနတေဲ့ "Defund the Police" ကို ပွညျနယျအစိုးရတှဘေကျက ဘယျလိုပွုပွငျပွောငျးလဲရေးတှေ လုပျဆောငျနသေလဲ။
ရဲတှခြေုပျနှောငျ ဖမျးဆီးမှုကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ လူမညျးအမြိုးသား George Floyd ရဲ့ ဈာပနအခမျးအနားကို တက်ကဆကျ ပွညျနယျ ဟူစတနျ မွို့မှာ ကငျြးပနပွေီး နာမညျကြျော အထငျကရ ပုဂ်ဂိုလျတှအေပါအဝငျ လူပေါငျး ရာနဲ့ခြီတကျရောကျလာတဲ့ နောကျဆုံးအခွအေနေ စတာတှကေို ဗှီအိုအေ အယျဒီတာ ဦးကြျောဇံသာကို မအငျကွငျးနိုငျက Skype ကနေ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ ဒီနတေ့ော့ အမရေိကနျမှာ အခွအေနကေ အေးအေးဆေးဆေးဖွဈတယျနျော နောကျပွီးတော့ George Floyd ရဲ့ အသုဘအခမျးအနား ကငျြးပနတေဲ့ Huston မွို့အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အနျကယျ ဘာတှေ တှရေ့သေးသလဲ။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ မအငျကွငျးပွောသလို အသုဘအခမျးအနား ကလညျး အေးဆေးတညျငွိမျတဲ့ ဘာသာရေးဆနျတဲ့ အခမျးအနားဖွဈပါတယျ။ သဆေုံးသှားသူရဲ့ နောကျဆုံးခရီးကို လိုကျပို့ကွဖို့အတှကျ သူ့ကို ဂုဏျပွုစကားတှေ ပွောကွတယျ အဲဒီမှာ တကျရောကျသူတှကေတော့ ၅၀၀ လောကျ ၊ သူတို့ကတော့ Private ceremony လို့တော့ချေါတာပဲ ဒါပမေယျ့ အပွငျမှာ ရှိနတေဲ့ ပရိသတျကလညျး တျောတျောမြားမြားရှိတယျ။ သူ့ရုပျအလောငျးကို သင်ျဂွိုဟျမယျ့နရောကို သယျဆောငျတဲ့လူတှပေါ စီတနျးလိုကျပါလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ အဲဒီမှာ သူ့ကို ဂုဏျပွုပွောတဲ့ အထဲမှာ အရေးကွီးတဲ့ ပုဂိုလျ ၂ ယောကျကတော့ ဒီမိုကရကျ သမ်မတလောငျး Joe Biden နဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး လှုပျရှားတဲ့ ခေါငျးဆောငျတဦးဖွဈတဲ့ Rev. Al Sharpton တို့ဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့လူတှကေလညျး သူ့ကို ခြီးကြူးထောပဌာပွုတဲ့ စကားတှေ ပွောကွတယျ ဓမ်မတေးတှေ သီဆိုကွတယျ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေး ရှိနပေါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ အခု အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ဖွဈနတေဲ့ လူမြိုးရေးခှဲခွားမှု ဆနျ့ကငျြတဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှမှော "Defund the Police" ကွှေးကွျောသံတှေ တျောတျောလေးပွငျးထနျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ရဲတပျဖှဲ့တှေ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးဆိုငျရာအပိုငျးမှာ ရဲတပျဖှဲ့တှအေတှကျ ဘတျဂကျြက ပွညျနယျအလိုကျပေးတာဆိုတော့ "Defund the Police" ကွှေးကွျောခကျြတှအေပျေါမှာ အနျကယျ ဘယျလိုမွငျပါသလဲ။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ Defund ဆိုတဲ့ စကားကို မွနျမာလို တိုကျရိုကျပွနျရငျတော့ Fund လုပျနတော မလုပျနဲ့တော့ဆိုတော့ ပိုကျဆံပေးနတော မပေးနဲ့တော့ ၊ ပိုကျဆံပေးနတော ရပျလိုကျဆိုတဲ့ သဘောမြိုး သကျရောကျပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဒီလောကျအထိ ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့ မပွငျးထနျပါဘူး တကယျလကျတှေ့ တငျပွနတေဲ့ အစီအစဉျတှကေတော့ ရဲတပျဖှဲ့ကို ပေးနတေဲ့ ဘတျဂကျြကို ပိုပွီးထိရောကျအောငျ ဘယျလို သုံးမလဲဆိုတဲ့သဘောကို အမြားအားဖွငျ့ ဦးတညျနတေယျလို့ တှရေ့ပါတယျ။ သူတို့က ဘာလုပျစခေငျြ သလဲဆိုတော့ရဲတပျဖှဲ့မှာ Policing ဆိုတာ လူဆိုးတှကေို ဖမျးတာ ၊ ထိနျးတာ အပွငျ တခွား ပညာရေးကိစ်စ ၊ ပွညျသူတှအေတှကျ ပိုလုံခွုံမှု ရှိစမေယျ့ တခွားကဏ်ဍတှေ တျောတျောမြားမြား လှဲပွောငျးသုံးဖို့ နောကျပွီးတော့ လူထုအသိုငျးအဝိုငျး ထဲက လူငယျတှကေိုလညျး လုံခွုံရေးကိစ်စမှာ ပါဝငျဆောငျရှကျနိုငျအောငျ ကူညီပံ့ပိုးဖို့ပေါ့လေ အဲဒီပိုကျဆံနဲ့ အဲဒီသဘောနဲ့ ပွောတာဖွဈပါတယျ။ တခြို့က Defund ၊ Dismantle ၊ Divert လို့ပွောတယျ တကယျတော့ တိတိကကြ ပွောရငျတော့ Defund လုပျတာ Divert ပေါ့လေ သူတို့ကို ပေးနတေဲ့ ဘတျဂကျြကို တခွားနရောတှမှော ဖွနျ့သုံးဖို့ သကျရောကျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့မွို့နယျတှမှောတော့ Minneapolis လိုမွို့တှမှောတော့ တျောတျောလေး ရှပွေ့ေးပွီးတော့ရဲတပျဖှဲ့ကို လုံးဝ ဖကျြပွီးတော့ ပုံစံသဈ တမြိုးနဲ့ အမြားပွညျသူတှရေဲ့ လုံခွုံရေးကို ဖျောဆောငျဖို့ဆိုတာ စဉျးစားနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ ဆိုတော့ အခု ဒီ ဆန်ဒပွပှဲတှပေေါ့နျော အမရေိကနျ သမိုငျးမှာလညျး အပွငျးထနျဆုံး လူထု ဆန်ဒပွပှဲတှအေခွအေနပေေါ့နျော အဲဒါလညျး ဖွဈလာတယျဆိုတဲ့အခါကတြော့ ဒီဆန်ဒပွပှဲတှရေဲ့ နိုငျငံရေး ဂယကျ ဘယျလောကျအထိ ကွီးမလဲရှငျ့။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ နိုငျငံရေး ဂယကျကတော့ ကွီးနိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အရငျတုနျးက ရှေးကောကျပှဲတှမှော ထိပျတနျး အငွငျးပှားစရာ ယှဉျနိုငျစရာမဟုတျခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာ တခုက အခုအခါမှာ ထိပျတနျးရောကျလာပါတယျ။ အဲဒါကတော့ အသားအရောငျခှဲခွားမှုနဲ့ တရားမြှတမှု မရှိတဲ့ကိစ်စ ။
သုတသေနပွုတဲ့ စဈတမျးတှအေရလညျး ဒီကိစ်စဟာ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတခု ဖွဈလာပွီဆိုတာ ပွောနပေါတယျ ဆိုတော့ ဒါဟာ အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတခုတော့ ဖွဈလာမှာပါ။ Joe Biden တို့ကို လူမညျးတှရေဲ့ မဲဆန်ဒက ပိုပွီးတော့ ပံ့ပိုးပေးလိမျ့မယျ သူတို့က လူမညျးတှရေဲ့ မဲနဲ့ ပိုပွီးတော့ အားသာလိမျ့မယျလို့ တခြို့က တှကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောစဉျးစားမိတာကတော့ Donald Trump က သူ့ရဲ့ အားသနျတဲ့ စီးပှားရေးကို ခိုငျမာတောငျ့တငျးအောငျလုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့ဟာနဲ့ အဓိက သူထားပွီးတော့ ယှဉျပွိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ အခု ဆန်ဒပွပှဲတှရေဲ့ နောကျဆုံးအခွအေနကေရော ဘယျလို ဆကျဖွဈလာမလဲ။ အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာဦးမလား။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ဆန်ဒပွပှဲတှကေတော့ အရှိနျနညျးနညျးလြော့သှားမယျလို့ ထငျပါတယျ သူ့ရဲ့ အသုဘအခမျးအနား ပွီးသှားတဲ့အခါမှာ ဒါပမေယျ့ ဒီ Issue ကတော့ ဆကျပွီးတော့ ရှိနမှောပါ။ ဒါဟာ ၁၉၆၀ မာတငျလူသာကငျးတို့ခတျေ လှုပျရှားမှု နောကျပိုငျးမှာ ဒီဆန်ဒပွပှဲဟာ လူထု ပါဝငျမှု အမြားဆုံးဖွဈတယျ။ အဖွူ၊ အမဲ၊ အာရှ၊ လတီနို အားလုံးပါဝငျကွတဲ့ လူထုအခမျးအနားကွီးဖွဈပါတယျ။ ဒီ Texas ပွညျနယျက ရဒေါဆိုတဲ့မွို့ တခြိနျတုနျးက KKK အစှနျးရောကျအဖွူတှရေဲ့ အဖှဲ့ကွီးစိုးတဲ့ မွို့ဆိုပွီးတော့ နာမညျ ဆိုးခဲ့တဲ့မွို့ အဲဒီမွို့မှာတောငျမှာ ဒီအခါမှာ တနျးတူအခှငျ့အရေးပေးဖို့ ဆန်ဒပွ စညျးဝေးတာတှေ ပျေါထှကျခဲ့တယျဆိုတော့ တျောတေျာ့ကို ထိရောကျပွောငျးလဲသှားတဲ့ကိစ်စလညျး ဖွဈပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ ဟုတျကဲ့ အခုလို အမရေိကနျကအခွအေနတှေကေို သုံးသပျပွောပွသှားတဲ့အတှကျ အနျကယျကို အမြားကွီး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ခငျဗြ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုက နောကျဆုံးအခွအေနေ စတာတှကေို ဗှီအိုအေ အယျဒီတာ ဦးကြျောဇံသာကို မအငျကွငျးနိုငျက Skype ကနေ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတာပါ။
George Floyd ဈာပနနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဥပဒေကြမ်း
ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း ဆိုင်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ သဘောထား
ရဲတပ်ဖွဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပြောင်းလဲရေး လွှတ်တော်ကြားနာပွဲနဲ့ သုံးသပ်ချက်
Joe Biden ဒုသမ္မတလောင်း ရွေးချယ်ရေးအပေါ် ဆန္ဒပြပွဲ ရိုက်ခတ်နိုင်ခြေ